I-IGUS Ukuveza Izinto Eziphilayo Ne-quot; Okuhlaza & I-quot; Automation - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-IGUS Ukuveza Izinto Eziphilayo Ne-quot; Okuhlaza & I-quot; Ukuzenzekelayo
"Green" Ukuphumelela okuzenzakalelayo: ukuhudula ochwepheshe be-chain kuJalimane, inkampani ithuthukise amandla okuphuthuma, ayenayo kanye nesisombululo sokulethwa kwemidiya, inikeza amandla asebenza kahle emisebenzini yokugcina impahla. Ukuhamba kungaphakathi kwezicelo ezingu-40 kuya ku-50, ukusetshenziswa kwamandla kanye nezindleko zokusebenza kwehlile kakhulu.
Emgqeni wokucubungula, njengemboni yokucubungela izinkuni isibonelo esihle: Uma izingxenye ezinzima zokukhiqiza nezinsimbi zilayisha futhi zilayishwa emadolobheni amade, kufanele zigcwaliswe ngamandla amancane ngokushesha nangokuthula. Kuyafana nokuletha ubuchwepheshe, njengamasistimu okugcina nokubuyisela, noma ama robot wokubala. Yilokho esikubiza ngokuthi "u-Automation".
Izindleko zamandla ezokuthutha
Amamodeli akhethekile okulawula, ama-Bear Bearings, i-Roller Bearings, i-Load Table